Iindaba -Amanqaku abalulekileyo kuyilo lolwakhiwo lwentsimbi
● Ngokucacileyo: ukuthintela ukuphuma kwamanzi emvula ngaphandle nangaphandle kuphahla lwentsimbi. Ngokubanzi amanzi emvula angena eluphahleni lwesinyithi ngokudibana kwemigca okanye iindawo ezigqumeneyo. Ukufezekisa umsebenzi ongenakuchukunyiswa, ukutywina iiwasher kufuneka kusetyenziswe kumlomo wokujija oya kuthi emva koko ufihlwe ulungiswe. Xa iipaneli zidibana, kufuneka kwenziwe itywina okanye unyango lwe-welding ukuphelisa iiraps.
● Ubungqina bomlilo: xa kuthe kwakho umlilo, kufuneka kuqinisekiswe ukuba izinto zophahla lwentsimbi azisayi kutsha, kwaye nelangatye alinakungena kuphahla lwentsimbi.
● Ubungqina bomoya: kuthathelwa ingqalelo uxinzelelo lomoya oluphezulu kwindawo yengingqi, uyilo lolwakhiwo lwesakhiwo sentsimbi kufuneka luqinisekise ukuba iiphaneli zophahla lwentsimbi aluyi kutsalwa ngoxinzelelo lomoya olubi.
● Ukugquma kwisandi: ukunqanda ukuhanjiswa kwesandi ukusuka ngaphandle kungena ngaphakathi okanye ukusuka ngaphakathi ukuya ngaphandle. Ngokubanzi izinto zokwambathisa ziya kuzaliswa phakathi kwamanqanaba eepaneli zophahla lwentsimbi. Ukusebenza kokugquma kuhambelana kakhulu nokuxinana kunye nobukhulu bezinto zokuthintela isandi.
● Ukungenisa umoya: kuthathelwa ingqalelo ukujikeleza komoya ngaphakathi nangaphandle, imingxunya kufuneka ibekwe kulwakhiwo lophahla.
● Ubungqina bokufuma: ukuthintela ukufuma komphezulu wamanzi kubume bophahla lwentsimbi. Isisombululo kukugcwalisa uboya obugqumeyo kumaleko eepaneli zophahla kwaye uncamathisele inwebu engangenwa ngamanzi kwiiphaneli zophahla.
● Ukuthwala imithwalo: ulwakhiwo lwesinyithi ishedyuli yokusebenzela kufuneka ibenomthwalo omkhulu wokuthwala ukuhlaselwa yimvula enkulu kunye nekhephu kunye nokuthwala umthwalo wolwakhiwo nolondolozo.
● Ukukhusela umbane: ukuthintela umbane ekungeneni kophahla lwentsimbi kwigumbi.
● Ukukhanyisa: i-sunroof ingasetyenziselwa ukuphucula ukukhanya kwangaphakathi emini. Inokuba ziipaneli zokukhanyisa okanye iglasi.
Lawula ukwanda kwe-thermal kunye nokucutha: kuthathelwa ingqalelo iindawo ezithile ezinomahluko omkhulu weqondo lobushushu, kufuneka iqinisekise ukuba iiphaneli zophahla lwentsimbi aziyi konakaliswa luxinzelelo olubangelwa kukwandiswa kwe-thermal kunye nokucutha.